Manao fanatanjahan-tena | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Karazana laharana inona no ao anatin'ny ady totohondry
inona avy ireo sokajy ao amin'ny Beginners. Ny atleta iray efa nanao ady totohondry nandritra ny 3 volana latsaka dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny fifaninanana. Sokajy faha-3. Ilaina ny mandresy ady 5 mandritra ny taona amin'ireo mpifaninana amin'ny fifaninanana ...
Aiza any Chelyabinsk dia misy toeram-pandihizana tsy dia mahafa-po, aerôbika, fanatanjahan-tena, + fihenam-bidy
Raha any Chelyabinsk dia misy gym tsy lafo, aerobics, fitness, + fihenam-bidy ho an'ny mpianatra studio Fitness sy dihy "Paradisa" Faly aho manasa anao hanatrika ilay dihy vaovao sy studio fanaovana fanatanjahan-tena Paradise, izay nisokatra vao tsy ela ...
Ahoana no handrefesana biceps? any amin'ny fanjakana tsotsotra? Te-hanara-maso ny fitomboan'ny boaty aho.
ahoana ny fandrefesana ny bisikileta? amin'ny fanjakana milamina? Te-hanaraka ny fitomboan'ny kapoaka aho. ny tena zava-dehibe dia ny refesina amin'ny fanjakana ihany. Matetika izy io dia atao amin'ny toerana milamina. Fa ny vokany amin'ny ...
Ahoana ny famerenana ny 2 kg amin'ny andro 1. Ankehitriny dia te hihinana izay azonao hanina aho Amin'izao fotoana izao dia hihazakazaka ny minitra 20
ny fomba very 2 kg ao anatin'ny 1 andro. izao dia te hihinana inona no hohaninao? Mbola hihazakazaka duaretics 20 minitra eo ho eo aho hanampy))) mifohaza. Esorina haingana ao amin'ny vatana ny rano. Tsy ...
Manampy amin'ny fampidinana ny taovolo ve ilay mpihaza, sa ny angano?
Manampy amin'ny paompy ny forearm angaha ny expander sa angano izany? Manana ny olana mitovy amiko aho, manify be ny taolana ka tsy haiko na handray expander sa tsia?! ny paosin-tanana mety tsy paompy, fa miharihary fa ratsy kokoa ...
Ahoana ary ahoana ny fomba fanasana toaka ski?
Ahoana ary ahoana no fanasana palitao ski ?? Eny, tsy mila manasa palitao amin'ny milina fanasan-damba ianao izay tsy azonao atao: ampiasao vovoka manasa lamba rehefa manasa, afaka manentsina ny mason-koditra io; ampio nohosorana, hanimba ny mahia ...
Mivoatra ve ny elanelana 500? na hatramin'ny 400 fotsiny?
500 metatra hafainganam-pandeha ve? sa hatramin'ny 400 ihany? Sprint dia andiana taranja atletisma, izay ifaninananan'ny atleta haingam-pandeha (mihazakazaka haingana) manerana ny kianja. Halavan'ny halavirana ...
Ahoana no hianaranao hisintaka ankizivavy?
Ahoana no hianarana misintona zazavavy? 1. Andalana ny sakana ambony mankany amin'ny tratra ary ao ambadiky ny loha 3 setres 12 reps, mifandimby aorian'ny 3-4 andro, raha misy gym manokana ao amin'ny gym ...
Ny vokatry ny creatine!
Vokatry ny creatine! Samy manana ny fomba fanaony ny tsirairay - ity ny valin'ny vatana manoloana ny lesoka ataon'ny olona iray manoloana ny fahavoazany manokana! mirary soa!)))) Indraindray kiritika, fivalanana ... lanja, tanjaka, fiaretana))) dia tsy nahatsikaritra ny vokany ...
Inona no glutamine ary nahoana no mihinana azy io?
Inona no atao hoe glutamine ary maninona no nohanina? Ny glutamine dia asidra amine tena ilaina hita ao amin'ny proteinina ary ilaina amin'ny fitomboan'ny hozatra mahomby sy ny fanohanan'ny hery fiarovan'ny vatana. raha fintinina dia mihinana izy ireo mba hahaf ...
Marina ve fa ny atleta dia mihamitombo ny fo sy ny pulsation noho izany miadana amin'ny toetry ny fahatoniana?
Marina ve fa manana atleta mihalehibe ny atleta ary noho izany dia manana fo mitombo tsimoramora ao anaty filaminana? eny, ny atleta matihanina dia mitombo ny haben'ny fo sy ny tachycardia, ity dia ...
Maty sy maty ny zavatra iray raha tsy izany, inona no fahasamihafana!
Deadlift sy deadlift dia iray ihany raha tsy izany dia inona no mahasamihafa azy! Misy karazany roa ny fisarihana: sumo kilasika. Ny deadlift mahazatra dia tanterahina amin'ny tongotra tery tery (saika ...
Mba hanesorana ny vavony, amin'ny inona ny simulators dia ilaina ny mifandray?
Inona no hanesorana ny kibo, amin'ny simulator inona no tokony hampiofaninao? Hafa ny kibo: rindrin'ny kibo malemy - avy eo manomboka amin'ny sternum ny kibo. Ny fomba mora indrindra hiatrehana izany dia ny tavy matavy (azo atao na dia hozatra aza ...
Ahoana ny fametrahana ny tsindry ho an'ny dite ho an'ny volana 1? olona
Ahoana ny fananganana abs ao anatin'ny 1 volana? Ho an'ny lehilahy, jereo ity tranonkala tsara ity izay tena tsara sy voafaritra mazava tsara amin'ny fomba mazava tsara http://www.greathome.tk/. Izaho manokana dia mianatra an'io programa io ihany ...
Ahoana ny fomba "maina" fanontaniana tsara ho an'ny atleta
Ahoana ny fomba "fanamainana" ny fanontaniana ho an'ny atleta Iray amin'ireo lesoka mbola fahita amin'ny bodybuilder maro ny fampihenana ny fatran'ny kaloria haingana loatra na be loatra. Fahadisoana iray hafa ihany koa ny fihinanana sakafo tafahoatra alohan'ny ...
Ahoana no fandefasana gazety? Teknika, fofona, sns.
Ahoana ny paompy tsara? Teknika, miaina, sns mampiakatra ny vatana amin'ny fofonaina, mampihena ny fofonaina. Miaina milamina. Tsara kokoa ny manao an'io. Atsangano ny vatana alohan'ny hanombohan'ny lohan'ny soroka ary handeha ...
Ahoana no handotoana ny rojo vy?
Ahoana ny fomba fanosorana rojo bisikileta? mila grafit. fa momba ny loto sy zavatra hafa mifikitra, ary noho izany dia tokony ho lamba izy io. azo atao amin'ny fomba sovietika. esorinao ilay rojo ary alentikao ao anaty masinina ...
Inona no omena ny mpikiky?
Inona no omen'ny squatting? +5 ny fanehoan-kevitra, ny fananganana +20 Ny squats dia manatsara ny hozatry ny g * py. tsy hoe firy ny squats, firy ny fanazaran-tena eo amin'ny ampondra (eny, ny squats angamba koa manetsiketsika ny vody)
Tena proteinina ve ny ironman? serumal
tsara ve ny proteinina ironman? whey proteinina tsara. Miombon-kevitra amin'i Nikita aho, proteinina maro no tena manodinkodina ny vavoniko, saingy izany no nahatonga ahy ho tsara! Ankoatr'izay, eo amin'ny ...
Ahoana ny fomba fanaovana fitongilanana
Fomba fanaovana crunches Technique 1. Mandry amin'ny tany ary aondriho amin'ny lohalika ankavanana ny lohalinao. Miala amin'ny tany ny tongotra. Apetraho ao ambadiky ny lohanao ny tananao ary 2. Afantohy amin'ny valindrihana ny masonao. 3. Manaova ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,576.